Banyere Anyị - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd.
Shenzhen Joint Teknụzụ Co., Ltd.
specializes na R & D na n'ichepụta ebu nhazi na ígwè akụkụ nhazi akụrụngwa, anyị mepụtara elu àgwà na elu-tech nnyocha, mmepe, n'ichepụta, ọrụ otu na management usoro, na gbasaa ngwaahịa na ihe karịrị 11 usoro si egwe ọka igwe, na igwe center, n'ibu. ogwe aka, akpaaka. Na ahụkebe àgwà ngwaahịa na iche ika aha, anyị na ngwaahịa na-ere ihe karịrị 40 mepere emepe obodo nile China, na-na ihe karịrị mba 20 n'ụwa nile gafee Asia, Europe na America.
Companylọ ọrụ anyị na-ewe ngwaahịa dị elu dị ka nghazi, echiche R&D bụ iji nye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma, ghọrọ ọkachamara na-emepụta ngwa ọrụ igwe nwere akara ngwaahịa zuru oke nke ebu na akụkụ igwe na-arụ ọrụ na ngwa ike siri ike nke China. .
Advantage Ọdịmma dị mma: usoro nhazi usoro zuru ezu na njikwa arụmọrụ na usoro ọrụ nyocha, teknụzụ nrụpụta dị elu, ngwanrọ nchọpụta nke mba dị elu na ngwaike - iji hụ na eweta ngwaahịa dị mma.
Advantages Nnyocha na mmepe uru: ihe karịrị afọ 20 nke na-agbaso nyocha miri emi na teknụzụ miri emi - emeela njirimara nke na-eme ngwa ngwa ngwa ka mma, hazie akụrụngwa ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi, ma nye akụrụngwa na itinye usoro zuru ezu.
Nkwepụta patent, na ịba uru ihe ntinye patent, nwebisiinka software ọtụtụ
ERP, CRM na usoro nlekọta ihe ọmụma ndị ọzọ - iji hụ na arụmọrụ nke ọma na ọganihu na-aga n'ihu.
Pụrụ iche uru:
Nye ndị ahịa ngwa ahịa ahaziri ahazi bara uru
Nye ndị ahịa nkwado ngwa ngwa nke ngwaahịa CNC, gụnyere nyocha ngwaahịa, usoro nhazi usoro, nhazi ngwa ahịa na imepụta ya.
nye ndị ahịa ebu ma ọ bụ akụkụ nhazi usoro ihe ọkụkụ dum jikọtara atụmatụ, gụnyere akụkụ nhazi atụmatụ ịkụ ihe, ngwa gafere.
Nye ndị ahịa ihe ngwọta agbakwunyere maka usoro mmepụta akpaaka, gụnyere akụrụngwa akụrụngwa, itinye na ibudata akpaaka, na akpaaka nnyefe ihe.